Fitafy tsara tarehy ho an'ny vehivavy feno - erotika sy fanitsiana, firaisana ara-pitiavana ary ny fisintonana
Ny lamba firakotra ho an'ny vehivavy matavy - ireo modely tsara tarehy sy sexy
Ny hatsaran-tarehy vehivavy dia tsy amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana, fa amin'ny halehiben'ny firaisana ara-drariny no mikarakara ny tenany, ny fomba amaritany ny vatany, ny akanjo tiany. Ny lamba firakotra ho an'ny vehivavy feno dia akanjo iray izay manampy vehivavy iray hahatsapa tarehy, sexy, matoky.
Fanaovan-jiro ho an'ny vehivavy matavy
Ny ankamaroan'ireo tovovavy dia maniry ny mividy entana izay mahafinaritra ny manao, izay mihaino tsara ny tenany, manantitrantitra na manitsy ny endrika. Ny lamba firakotra ho an'ny feno dia aseho amin'ny fivarotana marobe - ny kilalao , ny basy, ny bodys dia mahafeno ny fepetra takian'ny vehivavy lamaody - mipetraha tsara, jereo erotic. Ary amin'ny karazany toy izany, dia tsy tokony hisakantsakana ny tenanao amin'ny fahafinaretana hitadiavana lamaody ianao - mila manambitamby ny vadinao manokana.
Ny Stylists dia manoro hevitra ny hanatona ny doka amin'ny fividianana akanjo ho an'ny vehivavy feno andraikitra, tsy manely tanana amin'ny endriny, manamarina fa ny endrika mahazatra dia tsy afaka mijery tsara. Manontany ny manam-pahaizana:
tsy hahavita be ny habeny, fa ny zavatra mipetraka eo aminao tanteraka;
hadinoy ireo banga manify, momba ny vokatra misokatra misokatra;
mba hisintonana ny lisitr'ireo fividianana zavatra akaiky - ny lamba firakotra ho an'ny vehivavy matavy dia afaka ary tokony ho tsara;
Tadidio fa tsy mazàna ny kitapo vita amin'ny pyshechkam foana noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny ambany sy ny ambony.
Underwear ho feno
Fanamboarana fanitsiana amin'ny fomba feno
Ny filàn'izy ireo manokana dia mipetrapetraka amin'ny karazam-piravahana isan-karazany, mampiavaka ny fahanginana. Ny akanjo fitondra mandriaka ho an'ny vehivavy feno dia manafina ny fahadisoana madinika, toy ny kôdeksa ao amin'ny kibony, mampiakatra ny rambony, ny tratra - avo. Vita amin'ny spandex, lycra, mipetraha. Ireo vatosoa ireo dia elastika, haingana dia haingana ny endriny voalohany.
Ny akanjo fitondra mandeha tsizarizary dia natao hamongorana ireo kilema madinika. Rehefa voafetra dia tandremo ireto nuances ireto:
Ny lamba firakotra ho an'ny vehivavy feno an'io endrika io dia tsy tokony ho lehibe na kely, fa tokony hifanaraka tsara amin'ny hoditra;
Fa tsara ny tsy misy fotony , Ka tsy mamadika ny tenany amin'ny hafa.
Ny fepetra fanitsiana dia mety ho misy, miankina amin'ny fandeferanao, ny fahatsapana, ny endriky ny vatan'ny vatana.
Fametahana akanjo ho an'ny vehivavy matavy
Ao anatin'ny tolona ho an'ny bika aman'endrika, dia tonga amin'ny fampiasana fomba mahery vaika ny zazavavy. Nandritra ny taonjato lasa teo dia nanome voninahitra ny feon-kira, izay nentina nivoaka ireo vehivavy mandra- pahaveloman'izy ireo . Tsy ilaina ny maka ohatra ho azy ireo - ny olana ara-pahasalamana sy ny hatsaran-tarehy dia singa miavaka. Ny fanamafisana ny atin'akanjo ho an'ny feno dia mitaky fanitsiana avo lenta. Saingy tsy midika izany fa tsy tokony hahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana, ny aesthetics, ny fahadiovana. Io dia ampiasaina mba hanesorana tanteraka ny tsy fitovian'ny tarehimarika, mba hampifanandrify kokoa ny mifanohitra amin'ny idealy.
Misy modely maromaro fantatra ho an'ny vehivavy feno miaraka amin'ny vokatr'izany fanakanana izany:
pantony misy lavaka lavalava mba hiorenan'ny tavy na miaraka amin'ny lamosina mafy sy mihidy, manamaivana ny kavina;
famahanana na fampihenana ny habetsaky ny brassieres, tsy azo ampiasaina amin'ny fanatanjahantena;
Shorts mamafa santimetre eo amin'ny andilany;
Asa miasa amin'ny sehatra maromaro ary manitsy azy io amin'ny ankapobeny.
Ny zavatra mitranga dia hifanaraka amin'ireo vehivavy izay manana mari-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny kirarony. Maro ireo karazana dia mety raha mandeha amin'ny daty miaraka amin'ny tohiny ianao.
Akanjo fitondra milamina tsara ho an'ny vehivavy matavy
Sexy lingerie ho feno
Mivarotra izany ary sarotra ny handà izany. Tiavo ny vatanao dia tsy manampy trondro, fa tsy fanatanjahantena, fa ny vokatra tsara noforonina ho an'ny vehivavy tsara tarehy nataon'ireo mpanakanto manerantany. Ny fanaovan-jiro erotika ho an'ny vehivavy matavy dia tsy angano, raha tianao, dia afaka mahita ao amin'ny magazay fa tsy safidy isan'andro, fa tena tsy mahazatra, afaka mitondra olona iray ao amin'ny firaisana ara-nofo mahery.
Ny safidy ny karazana vokatra dia miankina amin'ny tanjona sy ny safidiny:
Ny akanjo sy ny panties, mareva-doko amin'ny dantelina, dia manambara mazava tsara ny faritra miafina ao amin'ny vatana mahavariana;
Ny peignoirs sy ny lobaka am-patana dia mirakitra ny misteriny, azo ifandraisana akaiky;
Baby-dollar akanjo, bodi avy satin, hoditra dia mamela anao hanoratra taratasy vaovao amin'ny fifandraisana akaiky.
Ny tsipìka marevaka dia mety ahitana garçons, kiraro , manan-jo hanjary ho mareva-dava, somary maloto, be fitiavana.
Fanaovan-jiro erotika ho an'ny vehivavy matavy
Fihetseham-behivavy mba ho feno
Tsy takatry ny maso izany garderobe izany. Saingy tompon'andraikitra amin'ny fahadiovana eo amin'ny faritra misy ny vatany, ary misy fiantraikany amin'ny endrika. Ny pantina ho feno dia mety ho tsara tarehy nefa tsy mampandefitra fampiononana. Misy fitsipika marobe amin'ny safidiny:
Aoka ianao ho marin-toetra amin'ny tenanao, aza miandry ny fotoana handosiranao mavesatra ary aza manamboatra ny famoranao miaraka amin'ny takelaka kely manaraka, raiso io habe io izay ataonao ankehitriny.
Aza mamonjy amin'ny kalitao - haingam-pandeha tsara ny haingam-pandeha haingana, mitombo haingana.
Miezaha mividy pataloha tsy hita eo ambanin'ny akanjo.
Fitafy tsara tarehy ho an'ny ankizivavy feno
Panties shorts ho an'ny vehivavy matavy
Misy maromaro maromaro akaiky ny vatan'ilay zavatra. Ny modely akaiky indrindra dia ny shorts. Ny akanjo toy izany ho an'ny ankizivavy feno dia tsy ankasitrahana tanteraka azy ireo, fa tsy ambany noho ny mahazatra sy ny hatsaran-tarehy. Sariaka amin'ny endriny tsara tarehy, mampiakatra ny rambony, mahatonga ny tarehimarika ho kely kokoa. Ny lamba rongony ho an'ny vehivavy feno dia maniry ny hitafy amin'ny ririnina, fa amin'ny fahavaratra dia mety. Ny shorts dia aseho ho laconic, ary lacy sexy.
Fitiavana tsy misy fotony ho an'ny vehivavy feno
Ny fahazoana akanjo dia miankina amin'ny teknolojian'ny vokatra, amin'ny fitaovana ampiasaina. Ny lobolon'ny vehivavy ho feno tanteraka ny firaiketam-po dia hanome fahatokiana tanteraka amin'ny tsy fetezany tsy hiantehitra, tsy ho hita mihitsy na dia eo aza ny akanjo marevaka, ny akanjo sy ny pataloha. Ny tombony dia ny fanitsiana ny silhouette, tsy hita maso. Ny mofomamy izay anaovana an'io vokatra io dia malefaka sy malefaka, elastika. Ny vokatra toy izany dia fanoloana tsara ho an'ny sipresy miaraka amin'ny elastic elbows, sns.
Hatsaratsara ho an'ny matavy
Ity modely ity dia hanampy amin'ny fanesorana ny tebiteby mivangongo na mandondona. Izany dia manamora ny fampiasana ny elastika, fa ny tavy matevina, ny tsangantsanganana mafy, amin'ny modely sasany - taolana. Ny akanjo tsara tarehy ho an'ny ankizivavy feno dia azo avy amin'ny lamba isan-karazany - avy amin'ny kodiarana ka hatramin'ny dantelina. Ireo karazana lava-pirahalahiana dia samy hafa ihany koa - manilika , shorts, tsipika. Ireo farany dia mipetraka tsara amin'ny dikan-teny avo lenta, dia tena ilaina izy ireo ao anaty akanjo mendrika.
Ny taratasy fangatahana ataon'ny vehivavy ho feno
Eritrereto ny fomban-damba tokony hofidiana, aza avela hiala ireo fahasamihafana feno fahasahiana. Feno firavaka sexy ho an'ny vehivavy feno ary mijery ilay endrika tsy ratsy noho ny amin'ny tovovavy matevina. Aza miraharaha ny fomba fijery fanamelohana na ny fanambaran'ilay mpivarotra, aza misalasala mividy an'io lamba io ho an'ny vehivavy matavy izay tianao ary mifanaraka aminao. Tsy dia tsara loatra amin'ny daty amorom-paty ny lobaka mangarahara , maro ny hatsara-tian'ny olona ny manao azy ireo foana. Ny hany tokana raha tsy mendrika ny hijanona izy ireo dia mandeha any amin'ny gym. Ho an'ny fanatanjahantena, mila manamboatra akanjo manokana ianao.
Birao ho an'ny vehivavy feno
Zara raha misy tratra kely ny tovovavy. Saingy ny vehivavy sasany dia tsy mirehareha fotsiny amin'ny haben'izy ireo, fa mahatsapa ihany koa ny tsy fahamendrehana amin'io lafiny io. Ny lamba firakotra ho an'ny vehivavy feno dia antsoina hanafoana izany. Manaiky ny manam-pahaizana ny amin'ny fomba hisafidianana ny taovolo havanana:
mividiana afa-tsy ny habetsahanao;
Mifanaraka amin'ny fitsipika - ny lehibe kokoa ny tratra, ny lehibe kokoa ny lela;
Tsy tokony ho ambany noho ny banky Soisa ny fahamendrehan'ny tanana. Izany dia atao amin'ny bingo avo, manainga ny tratra, ny fantsika sy ny taolana, manamboatra azy amin'ny lafiny rehetra.
Fanatanjahantena ho an'ny vehivavy matavy
Raha manana ny habeny ny CE iray dia tsy mahatsiaro ho matoky ny fampiofanana ara-panatanjahantena ny vehivavy iray. Ny fanatanjahan-tena vehivavy tsara tarehy ho an'ny feno dia afaka manova ny toe-javatra. Ny mpanamboatra ny fanatanjahan-tena dia mamokatra modely ho an'ny feno, miaraka amin'ny fanohanana tsara. Izy ireo dia vita amin'ny vatan'ny rivotra iainana izay tsy miteraka fanehoan-kevitra sy fitaintainana. Ny safidy idealy dia heverina, mipetraka ny lamba rongony dia afaka ampifanarahana amin'ny kirany ny vatanao - fa izany dia fantsom-pandaminana, fanampiny fibreser.
Karazan'akanjo fanatanjahan-tena ho feno
Ny taolana amin'ny taolana ho an'ny vehivavy feno
Ny tratra mafy dia tsy midika hoe mitafy tady tsy misy metaly na plastika plastika. Ny taolana dia mandray andraikitra lehibe amin'ny rafitra mpanohana. Manandratra ny fahamendrehan'ny vehivavy izy ireo, hanome endrika azy mahavariana. Tsy hita maso ny osa, noho izany dia mameno rongony erotika izy ireo. Tsy afaka mandalo fotsiny amin'ny tratran'ny tratra izy ireo na manao asa fanitsiana - ao amin'ny semigratia ny taolam-pasika dia mandalo amin'ny tendany.
Lamba tsara tarehy ho an'ny vehivavy feno
Tombo-kavina ho an'ny vehivavy feno
Izany zavatra mahagaga izany dia tsy nahatsiaro tena nanadino ny firaisana ara-nofo. Ary tsy misy ilana azy. Ity hatsaran-tarehy tsara tarehy ho an'ny vehivavy feno dia manana tombony maro:
dia mamorona endrika tsy azo itokisana ny tratra sy ny tady;
mamorona drafitra malefaka, manala fako be loatra;
Manamaivana ny tsindry avy amin'ny hazavana.
Semigratsiya dia tena mifanaraka amin'ny akanjon'ny andavanandro, ary mampiseho ny endrik'i tete-a-tete.
Ny akanjon'ny vehivavy any an-tsaha
Leather sneakers Adidas
Tafatafa amin'ny paosin'ny felana - 26 sary avy amin'ny modely modely amin'ny fotoana rehetra
Miantsena ao Seoul
Firafitr'olona avy amin'ny rex
Famaritana ny ligaments amin'ny lohalika - soritr'aretina
Biby ahitra ao anaty multifariate
Famaritana ny taolana
Vitamina ho an'ny mpiandry ondry alemà
Biby amin'ny saosy sotro
Fetin'ny ririnina - modely maoderina 2017
Soma tomato miaraka amin'ny tsaramaso
Nahoana no tsy mihinana kisoa?
Pangasius ao anaty lafaoro
Adjika miaraka amin'ny mena sy tomato
Sakafo vita amin'ny mofo fanafody
Hanome ny anaran'ny zanany lahy i Janet Jackson ho fanomezam-boninahitra ireo rahalahy farany
Benedict Cumberbatch matahotra ny fiainany
Clothes Michael Cors 2014